Iqhubekela Phambili Imidlalo yePremier Soccer League eZimbabwe
Imidlalo yesigaba sePremier Soccer League ingena kuviki yesithupha kulimpelaviki kulomdlalo ogobhozisa amathe ozakuba phakathi kweqembu le Highlanders lele Ngezi Platinum Stars ngeSonto.
NgoMgqibelo kulemidlalo emibili njalo lengegoqela ozakuba phakathi kweqembu le Bulawayo City lele Triangle enkundleni ye Barbourfields kanye lozakuba phakathi kwentshantshu zanyakenye iqembu le CAPS United leqembu le Chapungu ozaqhutshelwa enkundleni ye National Sports Stadium esigodlweni.
Imidlalo izaqhubekela phambili ngeSonto lapho iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu kodwa elidlala kuhle kakhulu ele Yadah elizemukela khona iqembu le Dynamos enkundleni ye Morris Depot kuthi enkundleni yeMandava esdolobheni le Zvishavane iqembu le Shabanie Mine lizemukela iqembu le Tsholotsho.
Iqembu le Hwange lizadibana leqembu le Chicken Inn enkundleni yeColliery khonale emalahleni kuthi iqembu le Highlanders lizangqikilana leqembu le Ngezi Platinum Stars enkundleni ye Barbourfields.
NgoMvulo kumele kube lemidlalo emibili lapho iqembu Harare City elizemukela ele ZPC Kariba enkundleni ye Morris Depot ngehola lakuqala eminikuthi koBulawayo iqembu leHow Mine leqembu le Bantu Rovers azadibana enkundleni ye Luveve Stadium.
NgoLwesibili iqembu le Black Rhinos lizadlala le FC Platinum enkundleni ye Morris Depot. Inkundla yeMorris Depot isentshenzisa kungoba inkundla ye National Sports Stadium izavalwa ngemva komdlalo wakusasa sekulungiselelwa ukuba isentshenziswe ngabebandla le Christ Ministries elika Pastor Chris mhla ziyisikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi.
Lesisehlakalo sidale ukuba abenhlanganiso ye Supersport obekumele bebonise kumabonakude imidlalo yakulimpelaviki ezadlalelwa esigodlweni bengasabuyi njalo sitshayisa inhlanganiso ye PSL ngekhanda njengoba inkundla yeRufaro isalungiswa kuthi eye Gwanzura kayilungelanga ukudlalelwa.